Imigomo Nemibandela-Oompompi Basekhishini, Oompompi Bokugcwalisa Embizeni, Oompompi Bokugeza | WOWOW
Oompompi Bamasinki Abacwilisiwe Abacashile
Ikhaya / Imibandela
Le webhusayithi iqhutshwa yithimba le-www.wowowfaucet.com. Kuyo yonke iwebhusayithi, amagama athi "thina", "thina" kanye no "wethu" abhekise eqenjini le-www.wowowfaucet.com. I-www.wowowfaucet.com inikeza le webhusayithi, kufaka phakathi lonke ulwazi, amathuluzi kanye nezinsizakalo ezitholakala kule sayithi kuwe, umsebenzisi, ezimiswe ekwamukelweni kwakho yonke imibandela, imibandela, izinqubomgomo nezaziso ezibhalwe lapha.
Ngokuvakashela isayithi lethu kanye / noma uthenga okuthile kithi, ubamba iqhaza "Esevisi" yethu futhi uyavuma ukuboshwa yimigomo nemibandela elandelayo ("IMIMISELO NEMIBANDELA", "Imigomo"), kufaka phakathi leyo migomo, imibandela nezinqubomgomo ezingeziwe okubalulwe lapha kanye / noma kutholakala ngesixhumanisi. Le migomo nemibandela isebenza kubo bonke abasebenzisi besayithi, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo abasebenzisi abayiziphequluli, abathengisi, amakhasimende, abathengisi, kanye / noma abanikeli bokuqukethwe.
Sicela ufunde le migomo nemibandela ngokucophelela ngaphambi kokungena noma ukusebenzisa iwebhusayithi yethu. Ngokungena noma ngokusebenzisa noma iyiphi ingxenye yesayithi, uyavuma ukuboshwa yile migomo nemibandela. Uma ungavumelani nayo yonke imigomo nemibandela yalesi sivumelwano, ngeke ukwazi ukungena kuwebhusayithi noma usebenzise noma yiziphi izinsizakalo. Uma le migomo nemibandela ibhekwa njengomnikelo, ukwamukelwa kukhawulelwe ngokusobala kula MAGAMA NEMIBANDELA.
Noma iziphi izici ezintsha noma amathuluzi afakwa esitolo samanje nawo azokhonjelwa EMIMISELWENI NEMIBANDELA. Ungabuyekeza inguqulo yamanje kakhulu YEMigomo Nemibandela nganoma yisiphi isikhathi kuleli khasi. Sinelungelo lokuvuselela, lokushintsha noma lokushintsha noma iyiphi ingxenye yale Migomo NEMIBANDELA ngokuthumela izibuyekezo kanye / noma ushintsho kuwebhusayithi yethu. Kungumsebenzi wakho ukuhlola leli khasi ngezikhathi ezithile ukuthola izinguquko. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo noma ukufinyelela kuwebhusayithi kulandela ukuthunyelwa kwanoma yiziphi izinguquko kusho ukwamukela lezo zinguquko.
ISIQEPHU 1 - IMITHETHO YOKUGCINA I-ONLINE
Ngokuvuma le migomo nemibandela, awunakusebenzisa imikhiqizo yethu nganoma iyiphi inhloso engekho emthethweni noma engagunyaziwe futhi, ekusetshenzisweni kwensizakalo, wephula noma imiphi imithetho endaweni yakho (kufaka phakathi kepha kungagcini emithethweni ye-copyright).
Akumelwe udlulisele noma yiziphi izibungu noma amagciwane noma noma iyiphi ikhodi yemvelo ewonakalisayo.
Ukwephulwa noma ukuphulwa kwanoma yiliphi leMigomo kuzoholela ekunqothulweni okusheshayo kwezinsizakalo zakho.
ISIQEPHU 2 - IZIMO EZIJWAYELEKILE
Sigcina ilungelo lokunqaba isevisi kunoma yisiphi isizathu nganoma yisiphi isikhathi.
Uyakwazi ukuthi okuqukethwe kwakho (okungabandakanyi ulwazi lwekhadi lesikweletu), kungadluliselwa okungabhalisiwe futhi kuhilele (a) ukudluliselwa kwamanethiwekhi ahlukahlukene; Futhi (b) izinguquko zokuvumelanisa nokuvumelanisa nezidingo zobuchwepheshe zokuxhuma amanethiwekhi noma amadivaysi. Ulwazi lwekhadi lesikweletu luhlale lubethelwe ngesikhathi sokudluliswa kwamanethiwekhi.
Uyavuma ukuthi ungazalisi, uphinde uphinde uphinde usebenzise noma usebenzise noma yikuphi ingxenye yesevisi, ukusebenzisa i-Service, noma ukufinyelela ku-Service noma noma yikuphi ukuxhumana kuwebhusayithi okunikezwa ngayo inkonzo, ngaphandle kwemvume ebhaliwe evela kithi .
Izihloko ezisetshenziswe kulesi sivumelwano zifakiwe kalula kuphela futhi ngeke zikhawule noma zithinte ezinye lezi Migomo.
ISIQEPHU 3 - UKUQINISEKISA, UKUGCWALISEKA NESIKHATHI SOLWAZI
Asinabo abathintekayo uma ulwazi olutholakala kulesi sayithi lungalungile, luphelele noma lwanamuhla. Izinto ezikulesi sayithi zinikezwa ngolwazi olujwayelekile kuphela futhi akufanele zithembeke noma zisetshenziswe njengesisekelo sodwa sokwenza izinqumo ngaphandle kokubonisana nemithombo eyisisekelo, enembile, egcwele noma ephelele ngesikhathi esithile yolwazi. Noma yikuphi ukuthembela kokuqukethwe kule sayithi kuyingozi yakho siqu.
Le sayithi ingaqukatha ulwazi oluthile lomlando. Ulwazi lomlando, empeleni, alukho okwamanje futhi luhlinzekwa yereferensi yakho kuphela. Sigcina ilungelo lokushintsha okuqukethwe kwaleli sayithi kunoma yisiphi isikhathi, kodwa asikho isibopho sokubuyekeza noma yiluphi ulwazi kusayithi lethu. Uyavuma ukuthi kuwumthwalo wakho wokuqapha izinguquko kusayithi lethu.
ISIGABA 4 - UKUGUQULWA KWENKONZO NAMANANI
Amanani emikhiqizo yethu ayashintsha ngaphandle kwesaziso.
Sigcina ilungelo nganoma yisiphi isikhathi ukuguqula noma ukuyeka isevisi (noma noma iyiphi ingxenye noma okuqukethwe kwayo) ngaphandle kwesaziso nganoma yisiphi isikhathi.
Ngeke sibe nesibopho kuwe noma kunoma yimuphi umuntu wesithathu nganoma yikuphi ukuguqulwa, ushintsho lwamanani, ukumiswa noma ukuyeka ukusebenza.
ISIQEPHU 5 - IMIKHIQIZO NOMA IMISEBENZI (uma ikhona)
Imikhiqizo ethile noma amasevisi angatholakala kuphela kwi-intanethi ngokusebenzisa iwebhusayithi. Le mikhiqizo noma amasevisi anganakho okulinganiselwe futhi angaphansi kokubuyiselwa noma ukushintshaniswa kuphela ngokusho kwenqubomgomo yethu yokubuyisela.
Senze yonke imizamo ukukhombisa ngokunembile ngangokunokwenzeka imibala nezithombe zemikhiqizo yethu ezivela esitolo. Asikwazi ukuqinisekisa ukuthi ukubonisa kombala wakho wekhompyutha kwanoma imuphi umbala kuzonemba.
Sigcina ilungelo, kodwa asibophekile, ukunciphisa ukudayiswa kwemikhiqizo noma amasevisi wethu kunoma yimuphi umuntu, isifundazwe noma igunya. Singasebenzisa leli lungelo ekusekeleni icala ngezigaba. Sigcina ilungelo lokunciphisa inani lemikhiqizo noma amasevisi esiwahlinzekayo. Zonke izincazelo zemikhiqizo noma izintengo zomkhiqizo zingashintsha nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso, ngokuqonda okuwukuphela kwethu. Sigcina ilungelo lokuyeka noma yimuphi umkhiqizo noma kunini. Noma yikuphi ukunikezwa kwanoma imuphi umkhiqizo noma isevisi eyenziwe kule sayithi ayikho lapho kunqatshelwe khona.
Asivumeli ukuthi ikhwalithi yanoma yimiphi imikhiqizo, amasevisi, ulwazi, noma ezinye izinto ezithengiwe noma ezitholwe nguwe zizohlangabezana nezilindelo zakho, noma ukuthi noma yimaphi amaphutha ku-Service azolungiswa.
ISIQEPHU 6 - UKUQINISEKISA KWOLWAZI LOKUKHOKHISA NOLWAZI LWE-AKHAWUNTI
Sigcina ilungelo lokunqaba noma yiliphi i-oda osibekayo nathi. Kungenzeka, ngokwengqondo yethu kuphela, sinciphise noma sikhiphe inani elithengiwe ngumuntu ngamunye, ekhaya ngalinye noma ngomyalelo ngamunye. Le mikhawulo ingabandakanya ama-oda afakwe noma ngaphansi kwe-akhawunti yekhasimende efanayo, ikhadi elifanayo lekhadi lesikweletu, kanye / noma ama-oda asebenzisa ikheli elifanayo lokukhokha kanye / noma lokuthumela. Uma kwenzeka senza ushintsho noma sikhansela umyalo, singase sizame ukukwazisa ngokuxhumana ne-imeyili kanye / noma ikheli lokukhokha / inombolo yefoni enikezwe ngesikhathi oda. Siphinde sinelungelo lokukhawulela noma ukuvimbela ama-oda athi, ekugwetsheni kwethu kuphela, avele abekwe ngabadayisi, abathengisi noma abahambisa.
Uyavuma ukuhlinzeka ngolwazi lwamanje, oluphelele nolutho olunembile nolwazi lwe-akhawunti yawo wonke ukuthenga okwenziwe esitolo sethu. Uyavuma ukuvuselela ngokushesha i-akhawunti yakho nolunye ulwazi, kufaka phakathi ikheli lakho le-imeyili nezinombolo zekhadi lesikweletu kanye nezinsuku zokuphelelwa yisikhathi, ukuze sikwazi ukuqedela ukuthengiselana kwakho futhi sikuthinte njengoba kudingeka.
Ukuze uthole imininingwane eyengeziwe, sicela ubuyekeze inqubomgomo yethu yokubuyisa.
ISIQEPHU 7 - AMATHULUZI OKUZITHANDELA
Singakunikeza ukufinyelela kwamathuluzi wesithathu ongeke sibheke noma angabi nawo ukulawula noma ukufaka.
Uyavuma futhi uyavuma ukuthi sinikezela ukufinyelela kulawo mathuluzi "njengoba kunjalo" futhi "njengoba kutholakala" ngaphandle kwanoma yiziphi iziqinisekiso, izethulo noma izimo zanoma yiluphi uhlobo futhi ngaphandle kokugunyazwa. Ngeke sibe nesibopho noma yini esivela noma ephathelene nokusebenzisa kwakho amathuluzi okhetho wesithathu.
Noma yikuphi ukusetshenziswa kwakho ngamathuluzi okuzikhethela okunikezwa kusayithi kuyingozi ngokwakho kanye nokuqonda futhi kufanele uqinisekise ukuthi uyazi futhi uyavuma ukuthi yimaphi amathuluzi anikezwa ngumhlinzeki (third party party).
Futhi, ngokuzayo, singanikela ngezinsizakalo ezintsha kanye / noma izici ngokusebenzisa iwebhusayithi (kufaka phakathi, ukukhishwa kwamathuluzi amasha nezinsizakusebenza). Izici ezintsha kanye / noma izinsizakalo nazo zizoncika kule migomo nemibandela.
ISIQEPHU 8 - UKUXHUMANA KWESIQEPHU SESITHATHU
Okuqukethwe okunye, imikhiqizo kanye nezinsizakalo ezitholakalayo nge-Service yethu zingase zihlanganise izinto ezivela kumaqembu wesithathu.
Izixhumanisi zenkampani yesithathu kule sayithi zingakuqondisa kumawebhusayithi wesithathu angabambisene nathi. Asinawo obhekene nokuhlola noma ukuhlola okuqukethwe noma ukunemba futhi asiqinisekisi futhi ngeke sibe nomthwalo noma umthwalo wemfanelo kunoma yiziphi izinto zokwesekwa eceleni noma amawebhusayithi, noma nganoma yiziphi ezinye izinto, imikhiqizo, noma izinsizakalo zabangaphandle.
Asinacala nganoma yikuphi ukulimala noma ukulimala okuhlobene nokuthengwa noma ukusetshenziswa kwezimpahla, izinsiza, izinsiza, okuqukethwe, noma okunye ukuthengiselana okwenziwe maqondana nanoma yimaphi amawebhusayithi enkampani yangaphandle. Sicela ubuyekeze ngokucophelela izinqubomgomo nemikhuba yenkampani yangaphandle futhi uqiniseke ukuthi uyaziqonda ngaphambi kokuhlanganyela kunoma ikuphi ukuthengiselana. Izikhalazo, izimangalo, ukukhathazeka, noma imibuzo maqondana nemikhiqizo evela eceleni kufanele iqondiswe kumuntu ovela eceleni.
ISIQEPHU 9 - UKUPHAWULA KWABASEBENZISI, UKUPHENDULA KANYE NEZINYE IZIKHUNGO
Uma, ngokwesicelo sethu, uthumela ukuthunyelwa okuthile (ngokwesibonelo okufakiwe komncintiswano) noma ngaphandle kwesicelo esivela kithi uthumela imibono yokudala, iziphakamiso, iziphakamiso, izinhlelo, noma ezinye izinto, kungaba ku-inthanethi, nge-imeyili, ngeposi leposi, noma ngenye indlela (ngokuhlanganyela, 'ukuphawula'), uyavuma ukuthi nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kokuvinjelwa, singahlela, sikopishe, sishicilele, sisabalalise, sihumushe futhi sisebenzise kunoma iyiphi indlela noma yimaphi amazwana osithumela wona. Singaphansi kwesibopho (1) sokugcina noma yikuphi ukuphawula kuyimfihlo; (2) ukukhokha isinxephezelo nganoma yikuphi ukuphawula; noma (3) ukuphendula kunoma yikuphi ukuphawula.
Singakwazi, kepha asinaso isibopho, sokuqapha, sokuhlela noma sokususa okuqukethwe esinquma ngokubona kwethu ukuthi akukho emthethweni, kuyacasula, kuyasabisa, kuyinhlamba, kuhlambalaza, izithombe zobulili ezingcolile, kuyichilo noma kuyaphikiswa ngenye indlela noma kwephula impahla enobuhlakani yeqembu noma le migomo nemibandela .
Uyavuma ukuthi amazwana akho ngeke aphule noma yiliphi ilungelo lomuntu wesithathu, okufaka i-copyright, uphawu lokuhweba, ubumfihlo, ubuntu noma elinye ilungelo lomuntu siqu noma elifanele. Uyaqhubeka uvuma ukuthi amazwana akho ngeke aqukethe izinto ezimbi noma ezingekho emthethweni, ezihlambalazayo noma ezihlambalazayo, noma aqukethe noma yikuphi igciwane lekhompyutha noma enye i-malware engayithinta nganoma iyiphi indlela ukusebenza kweNsizakalo noma iyiphi iwebhusayithi ehlobene. Ungase ungasebenzisi ikheli le-imeyli elingamanga, uzenze sengathi ungomunye umuntu ngaphandle kwakho, noma ukusidukisa thina noma abantu abathintekayo ngokuqondene nomsuka kwanoma yikuphi ukuphawula. Wena unesibopho kuphela kunoma yikuphi ukuphawula okwenzayo nokuqondile kwawo. Asithathi umthwalo wemfanelo futhi asikwenzeki ukuthi yikuphi ukuphawula okuthunyelwe nguwe noma omunye umuntu wesithathu.
ISIQEPHU 10 - IMINININGWANE YOMUNTU
Ukuhambisa kwakho kolwazi lomuntu siqu kusitolo kulawulwa inqubomgomo yethu yobumfihlo.
ISIQEPHU 11 - AMAPHUTHA, AMAPHEPHA NOKUHLAWULELWA
Ngezinye izikhathi kungase kube nolwazi kusayithi lethu noma kwi-Service equkethe amaphutha we-typographical, ukungalungi noma ukushiya okungahambelana nezincazelo zomkhiqizo, izindleko, ukukhushulwa, ukunikezwa, amacala okuthumela umkhiqizo, izikhathi zokuhamba nokutholakala. Sigcina ilungelo lokulungisa noma yikuphi amaphutha, ukungalungi noma ukushiya, nokushintsha noma ukuvuselela ulwazi noma ukukhansela ama-oda uma ngabe yiluphi ulwazi ku-Service noma kunoma yiliphi iwebhusayithi ehlobene alilungile nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kwesaziso esandulele (kufaka phakathi kokuthi uthumele i-oda lakho) .
Asazibophezeli ukuvuselela, ukuchibiyela noma ukucacisa ulwazi ku-Service noma kunoma yiliphi iwebhusayithi ehlobene, kuhlanganise ngaphandle kwemingcele, ulwazi lwezentengo, ngaphandle kokuthi kudingeke umthetho. Akukho ukubuyekeza okucacisiwe noma usuku lokuvuselela olwenziwe ku-Service noma kunoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, kufanele kuthathwe ukuze kuboniswe ukuthi lonke ulwazi ku-Service noma kunoma yiliphi iwebhusayithi elihlobene lishintshiwe noma libuyekeziwe.
ISIQEPHU 12 - UKUSETSHENZISWA OKUVIMBELWE
Ngokungeziwe kokunye ukwenqatshelwa njengoba kubekiwe ku-TERMS KANYE NEMIBANDELA, uvunyelwe ukusebenzisa isiza noma okuqukethwe kwaso: (a) nganoma iyiphi injongo engekho emthethweni; (b) ukunxenxa abanye ukuba benze noma babambe iqhaza kunoma yiziphi izenzo ezingekho emthethweni; (c) ukwephula noma yimiphi imithethonqubo, imithetho, imithetho, noma izimiso zendawo; (d) ukwephula noma ukwephula amalungelo ethu empahla yobuhlakani noma amalungelo obunikazi bokusungula kwabanye; (e) ukuhlukumeza, ukuhlukumeza, ukuhlambalaza, ukulimaza, ukuhlambalaza, ukunyundela, ukweyisa, ukwesabisa, noma ukubandlulula ngokuya ngobulili, inkanuko yobulili, inkolo, ubuhlanga, ubuhlanga, ubudala, imvelaphi yobuzwe, noma ukukhubazeka; (f) ukuletha imininingwane engamanga noma edukisayo; (g) ukulayisha noma ukudlulisa amagciwane noma olunye uhlobo lwekhodi enonya ezosetshenziswa noma engasetshenziswa nganoma iyiphi indlela ezothinta ukusebenza kwe-Service noma iyiphi iwebhusayithi ehlobene nayo, amanye amawebhusayithi, noma i-Intanethi; (h) ukuqoqa noma ukulandelela imininingwane yomuntu siqu yabanye; (i) ukwenza ugaxekile, i-phish, i-pharm, ibhaxa, isicabucabu, ukukhasa noma ukusula; (j) nganoma yiziphi izinhloso eziyichilo noma zokuziphatha okubi; noma (k) ukuphazamisa noma ukunqanda izici zokuphepha zoMnyango noma enye iwebhusayithi ehlobene nayo, amanye amawebhusayithi, noma i-Intanethi. Sinelungelo lokuqeda ukusetshenziswa kwakho kwensizakalo noma enye iwebhusayithi ehlobene nokwephula noma yikuphi ukusetshenziswa okungavunyelwe.
ISIQEPHU 13 - ISIVIVINYO SEZIQINISEKISO; UKULINGANISWA KWESIBOPHO
Asiqinisekisi, simele noma siqinisekisa ukuthi ukusetshenziswa kwakho kwensizakalo yethu ngeke kuphazamiseke, ngesikhathi esifanele, kuphephile noma kungenaphutha.
Asivumeli ukuthi imiphumela engatholakala emisebenzini yensizakalo iyoba nenembile noma inokwethenjelwa.
Uyavuma ukuthi ngezikhathi ezithile singasusa isevisi isikhathi esingenamkhawulo noma sikhansele insizakalo nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kwesaziso kuwe.
Uyavuma ngokusobala ukuthi ukusebenzisa kwakho, noma ukungakwazi kwakho ukusebenzisa, le nsizakalo kuyingozi yakho kuphela. Isevisi nayo yonke imikhiqizo nezinsizakalo ezilethwe kuwe ngale nsizakalo (ngaphandle kwalapho kuchazwe ngokusobala yithi) zinikezwa 'njengoba zinjalo' futhi 'njengoba zitholakala' ukuze uzisebenzise, ​​ngaphandle kokumelwa, amawaranti noma imibandela yanoma yiluphi uhlobo, noma ngabe iveze noma Kushiwo, kufaka phakathi zonke iziqinisekiso noma izimo zokuthengiselana, ikhwalithi yokuthengiseka, ukufaneleka kwenjongo ethile, ukuqina, isihloko, nokungaphuli umthetho.
Ngaphandle kwalokho, thina, abaqondisi bethu, izikhulu, abasebenzi, abathintekayo, abathintekayo, izinkontileka, abaqeqeshi, abahlinzeki, abahlinzeki bezinsizakalo noma abanikezeli bamalayisensi kumele baphathwe noma yikuphi ukulimala, ukulahleka, isimangalo noma okunye okuqondile, okungaqondile, okungahle kwenzeke, okujezisa, okukhethekile noma ukulimala okulandelwayo kwanoma yiluphi uhlobo, kufaka phakathi, ngaphandle kwemingcele elahlekile, inzuzo elahlekile, imali elahlekile, ukulahlekelwa kwedatha, izindleko zokufaka esikhundleni, noma ukulimala okufanayo, kungakhathaliseki ukuthi kusekelwe enkontileka, ukuhlukunyezwa (okufaka ukunganaki), icala eliqinile noma ukusetshenziswa kwanoma yiyiphi insizakalo noma yimiphi imikhiqizo etholakale isebenzisa isevisi, noma nganoma yisiphi esinye isimangalo esihlobene nganoma iyiphi indlela ekusetshenzisweni kwakho kwensizakalo noma yimuphi umkhiqizo, kufaka phakathi, kodwa kungagciniwe, noma yimaphi amaphutha noma ukushiywa kunoma yikuphi okuqukethwe, noma yikuphi ukulahlekelwa noma ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo olwenziwe ngenxa yokusetshenziswa kwensizakalo noma noma yikuphi okuqukethwe (noma umkhiqizo) okuthunyelwe, okudlulisiwe, noma okunye okwenziwe nge-service, noma ngabe kunconywe ukuthi kungenzeka. Ngenxa yokuthi abanye bathi noma iziphathimandla azivumeli ukukhipha noma ukukhawulelwa kwecala lokulimala okulandelanayo noma okungahle kwenzeke, kulawo mazwe noma iziphathimandla, inkokhelo yethu iyobekelwe kuphela ekuvunyeni komthetho.
ISIQEPHU 14 - UKUKHOMBEKISA
Uyavuma ukusibopha, usivikele futhi usibambe singenabungozi thina kanye nomzali wethu, izinkampani ezingaphansi kwethu, abaxhumana nathi, ophathina bethu, izikhulu, abaqondisi, amanxusa, osonkontileka, abanikezeli bamalungelo, abahlinzeki bezinsizakalo, osonkontileka abangaphansi, abahlinzeki, abaqeqeshwa kanye nabasebenzi, abangenabungozi kunoma yisiphi isimangalo noma isidingo, kufaka phakathi okufanelekile imali yabameli, eyenziwe yinoma ngubani ovela eceleni ngenxa noma yokweqa ukwephula kwakho IMIGOMO NEMIBANDELA noma imibhalo abayifaka ngereferensi, noma ukwephula kwakho noma yimuphi umthetho noma amalungelo ovela eceleni.
ISIQEPHU 15 - UKUQINISEKA
Uma kwenzeka noma yikuphi ukuhlinzekwa kwale migomo nemibandela kunqunywa ukuthi akukho emthethweni, akusebenzi noma akunakuphoqeleka, lokho kuhlinzekelwa kuzosebenza ngokugcwele ngokugcwele okuvunyelwe ngumthetho osebenzayo, futhi ingxenye engenakuphoqelelwa izothathwa njengehlukanisiwe kule MIGOMO FUTHI IMIBANDELA, ukuzimisela okunjalo ngeke kuthinte ubuqiniso nokuphoqelela kwanoma yiziphi ezinye izinhlinzeko ezisele.
ISIQEPHU 16 - UKUQEDWA
Izibopho kanye nezikweletu zamacala asebenza ngaphambi kokuphela kosuku kuzosinda ekupheleni kwalesi sivumelwano kuzo zonke izinhloso.
Le migomo nemibandela iyasebenza ngaphandle kokuthi kuze kube yilapho inqanyulwa nguwe noma thina. Ungaqeda le migomo nemibandela nganoma yisiphi isikhathi ngokusazisa ukuthi awusafuni ukusebenzisa izinsizakalo zethu, noma lapho uyeka ukusebenzisa isiza sethu.
Uma ekwahluleleni kwethu kuphela wehluleka, noma sisola ukuthi wehlulekile, ukuthobela noma yiliphi igama noma ukuhlinzekwa kwale migomo nemibandela, nathi singasiqeda lesi sivumelwano noma kunini ngaphandle kwesaziso futhi uzohlala unesibopho kuyo yonke imali ekhokhwayo kufaka futhi kufaka phakathi usuku lokunqanyulwa; futhi / noma ngokufanele angakunqabela ukufinyelela Ezinsizakalweni zethu (noma kunoma iyiphi ingxenye yalokho).
ISIQEPHU 17 - ISIVUMELWANO SONKE
Ukwehluleka kwethu ukusebenzisa noma ukuphoqelela noma yiliphi ilungelo noma ukuhlinzekwa kwale MIBANDELA NEMIBANDELA ngeke kwenze kuchithwe lelo lungelo noma ukuhlinzekwa.
Le migomo nemibandela nanoma yimiphi imigomo noma imithetho yokusebenza ethunyelwe yithi kuleli sayithi noma maqondana ne-Service yenza sonke isivumelwano nokuqonda phakathi kwakho nathi futhi ilawula ukusetshenziswa kwakho kwensizakalo, ithatha indawo yezivumelwano zangaphambili noma zesikhathi esithile, ukuxhumana neziphakamiso , noma ngabe kwenziwa ngomlomo noma kubhaliwe, phakathi kwakho nathi (kufaka phakathi, kepha kungakhawulelwe, kunoma iziphi izinhlobo zangaphambilini ze-TERMS AND CONDITIONS).
Noma ikuphi ukungaqondakali ekuchazweni kwale MIBANDELA NEMIBANDELA ngeke kuthathelwe eqenjini elibhalayo.
ISIQEPHU 18 - UMTHETHO OBUSAYO
Le migomo nemibandela kanye nanoma iziphi izivumelwano ezihlukile lapho sikunikeza khona Izinsizakalo zizophathwa futhi zenziwe ngokuya ngemithetho yase-UK.
ISIQEPHU 19 - IZINGUQUKO ZOKUGUQULWA KWEZIMISO NEZIMO
Ungabuyekeza inguqulo yamanje kakhulu yemigomo nemibandela nganoma yisiphi isikhathi kuleli khasi.
Sigcina ilungelo, ngokubona kwethu kuphela, ukuvuselela, ukushintsha noma ukufaka enye ingxenye yale Migomo NEMIBANDELA ngokuthumela izibuyekezo nezinguquko kuwebhusayithi yethu. Kungumsebenzi wakho ukuhlola iwebhusayithi yethu ngezikhathi ezithile ukuthola izinguquko. Ukuqhubeka kwakho nokusebenzisa noma ukufinyelela kuwebhusayithi yethu noma i-Service kulandela ukuthunyelwa kwanoma yiziphi izinguquko kule migomo NEMIBANDELA kusho ukwamukela lezo zinguquko.
Iwaranti eyengeziwe yezinyanga eziyi-6